असफलतातर्फ उन्मुख कम्युनिस्ट एकताको प्रसंग – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
असफलतातर्फ उन्मुख कम्युनिस्ट एकताको प्रसंग
२०७० चैत्र १३, बिहीबार ०३:२५ गते
हिजोभन्दा आज नेपाल नामको राष्ट्र हरेक शीर्षकमा कमजोर बन्दै गएको छ । समाज अनुशासनहीन, राजनीति अन्यौलपूर्ण र अस्थिर, अर्थ व्यवस्था डामाडोल बन्दैछ । जनतालाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न पल्केको सरकारका कारण पहाडी गाउँबस्ती रित्तिँदै छन् । खेतीपाती गर्न दह्रा हातपाखुरा चाहिन्छ । ती दह्रा हातपाखुरा विदेशी भूमिमा छन् । गाउँमा कसैको मृत्यु हुँदा मलामी छैनन् मात्रै होइन, लास बोकेर घाटसम्म पु¥याउने दुई–चार जना मान्छेको पनि अभाव देखिएको छ । कोही बिरामी हुँदा अस्पताल पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । बूढाबूढी बिरामी पर्दा बच्चाबच्चीले अस्पताल लान सक्दैनन् । बच्चाबच्ची बिरामी हुँदा बूढाबूढीले डाक्टरलाई देखाउन सक्ने अवस्था छैन । खेतबारी बाँझै छन् । कतैकतै सुत्केरी महिलाहरुले हलो जोतेर अन्न उत्पादन गरी लालाबालाको ज्यान जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
मुलुकभित्र उत्पादन शून्य छ । सूर्यको तापसहितको उज्यालो, प्रदूषित नै किन नहोस् ! हावा, ब्याक्टेरिया र भाइरससहितको पानी, अहिलेसम्म जोगिएको १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरको टेक्न मिल्ने जमिन र नांगो शरीर नेपालीसँग छ । यसका अतिरिक्त नेपालीसँग केही छैन । पुरूषका लागि टाउकोदेखि सुरू गर्दा कपाल कोर्ने काइँयो, काट्ने कैँची र घस्ने तेल विदेशबाट ल्याइन्छ । दाह्री काट्ने ब्लेड, ब्रुस र सेभिङ क्रिम, घाँटीबाट तल खुट्टासम्म लगाइने गन्जी, कमिज, पाइन्ट, कोट, मोजा, कट्टुसम्म सबै विदेशबाट ल्याइन्छ । हातखुट्टाका औँलामा पलाउने नङ काट्ने नेल कटरसमेत विदेशबाट ल्याइन्छ । महिलाका लागि पनि टाउकामा घस्ने तेल, लगाउने काँटा, धागो, चुरा, भित्री कपडा, सबै खालका लुगा, थरीथरीका चप्पल र जुत्ता, पाउडर, लिपस्टिक, चुरा, बाला, माला, झोला, नङ पालिस आदिआदि सबका सब सामान विदेशबाट ल्याइन्छ । सार्वजनिक प्रयोगका लागि कागज, मेसिनरी सामान, रड, सिमेन्ट, मोटर गाडी, कार, मोटरसाइकल, साइकल, रिक्सा, सियो, धागो, सिसाकलम, औषधि, अस्पतालमा प्रयोग हुने सामान, कम्प्युटर, थाल, कचौरा, गिलास, कीला, चम्चा, प्लेट, हार्डवेयरका सामान, क्यामरा, रेडियो, टेलिभिजन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेललगायत आज नेपालमा नेपालीले जति पनि सामानहरु प्रयोग गरिरहेका छन्, ती सबै विदेशबाट किनिएका वा मागिएका छन् ।
एकातिर युवाशक्ति विदेशिएका कारण मुलुक कुँजो बनेको छ भने तिनै युवाहरुले हाडछाला घोटेर कमाएका रेमिट्यान्सबाट चामल, दाल, चिनी, आलु, प्याज र लसुनसमेत खरिद गरिएको छ । कृषिप्रधान देश नेपाल भनियो, अन्नसमेत विदेशबाट खरिद गरियो । यहाँसम्म कि पर्याप्त अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै माछासमेत छिमेकी मुलुकबाट झिकाइयो । मासुका लागि खसी, बोका, राँगा, भैँसी पनि भारतबाट खरिद गरियो । यसरी हरेक कोणबाट मुलुकलाई उत्पादन शून्य बनाएर परनिर्भर बनाइयो । दुनियाँलाई थाहा छ– परनिर्भर मुलुक कुनै पनि बेला असफल राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ । अहिले नेपालको अवस्था परनिर्भर भएकै कारण असफल मुलुकतर्फ उन्मुख छ । माथि व्याख्या गरिएका प्रमाणहरुले यही कुराको संकेत गरेका छन् ।
मुलुकको यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्थाका बीचमै दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । पहिलो संविधानसभाले नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन सकेन । जनताले ठूलो आशा र भरोसाका साथ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यतिबेलाको माओवादी पार्टीलाई ठूलो पार्टीको हैसियतमा उभ्याए । विगतमा माओवादीको राजनीतिक तौरतरिका कति ठीक थियो र कति गलत, जनता त्यसतर्फ जान चाहेनन् । केवल जनताले भन्यो– “माओवादीहरु राष्ट्रियताका मामलामा खरा छन् । यिनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ ।” यो खालको संकल्पका बीच जनताले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई धेरै मत दिएर ठूलो पार्टी बनाए । कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य साना दलहरुलाई समेटेर नयाँ संविधान निर्माणतिर माओवादी लाग्नुपर्ने थियो, तर त्यो मौकाको सदुपयोग त्यतिबेलाको माओवादी पार्टी र खासगरी त्यो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्न सकेनन् ।
नयाँ संविधान बन्न नसक्नुमा कमजोरी र खराबीहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेहरुको पनि थियो, तर ठूलो पार्टीको हैसियतले माओवादीले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जनतालाई त्यो तरिकाले सम्बोधन नगरी पार्टीका नेताबीच नै मनमुटाव सुरू भयो । देखिने र नीतिगत खालको विवाद नभई नेता–नेताबीच व्यक्तित्वका हिसाबले टकराव देखियो । परिणाम देखा प¥यो । माओवादी पार्टी विभाजन भयो । साना–साना कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेटेर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको अवस्थामा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटेर नेकपा माओवादी बनेपछि स्वाभाविक रुपमा दुवै कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भए । एमाओवादी पार्टीले भारतीय शासकसामु आत्मसमर्पण गरेको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बिपा सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गरेको, सम्पूर्ण रुपले विदेशीको इशारामा चलेको जस्ता आरोपहरु नेकपा माओवादीले लगायो । एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि माओवादीबिना राजनीतिक उद्देश्य कुहिराको काग भएको, मुलुकलाई अघि बढ्न नदिने गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको, मुलुक र युग सुहाउँदो राजनीतिक गतिविधिको प्रयासै नगरेको आरोप लगायो ।
आरोप–प्रत्यारोपबीच फुटेका दुई माओवादीमध्ये प्रचण्ड नेतृत्ववाला एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दाबीका साथ होमियो, तर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी “यो निर्वाचन धोका हो, यसले राष्ट्रको समस्या समाधान गर्दैन र जनपक्षीय संविधान पनि बनाउँदैन”, भन्ने उद्घोषका साथ संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । संख्याका हिसाबले प्रचण्डतिर केही बढी कार्यकर्ता सामेल भए वा वैद्यतिर त्यो त्यति मह¤वको विषय भएन । पार्टी किन फुट्यो र कसले के उद्देश्य लियो ? त्यो मह¤वपूर्ण हुन्छ । तर, स्पष्ट देखियो– वैद्य गलत छन् भन्ने दाबी गरिरहेका प्रचण्ड निर्वाचनमा गएर पछारिएपछि आफू गलत रहेछु भन्ने थाहा पाए भने प्रचण्डलाई गलत भन्दै जनविद्रोहको आधार खडा गर्न हिँडेका वैद्य पनि आफ्नो उद्देश्यमा यतिबेलासम्म सफल भएनन् । फुट्दा न प्रचण्ड सफल भए, न त वैद्य । तर, यसको नकारात्मक असर भने नेपाली जनताको मन–मष्तिस्कमा पर्न गयो ।
जनता त्यही हुन्, जसले २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गरेर पटकपटक बहुमत दिए । विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगतिको आशा गरे तर जनतालाई धोका भयो । त्यो पार्टीका थुप्रै नेताहरु धनी भए, जनता जहाँको त्यहीँ रहे । कम्युनिस्ट पार्टी भन्न नछाडेको लोकतान्त्रिक पार्टी एमालेलाई पनि जनताले पटकपटक सत्तामा सहभागी गराए, तर एमाले यता न उताको अवस्थामा रहिरह्यो । ठूलो विश्वासका साथ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो पार्टीको हैसियतमा स्थापित गराएर सरकारमा समेत पु¥यायो । तर, प्रचण्डले माखो मारेनन् । सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा अल्झिएर समय बर्बाद पारे ।
अनेक–अनेक शीर्षकमा पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएर फुटेको पार्टी फेरि यतिबेला जुट्ने कुरा भइरहेको छ । अब जनताले प्रश्न तेस्र्याउने छन्– प्रचण्ड महोदय, अब नेकपा माओवादीसँग किन पार्टी एकीकरण गर्ने ? मोहन वैद्यलाई पनि त्यस्तै खालको प्रश्न तेर्सिने छ– कमरेड वैद्य, पार्टी के कारणले फुटाउनुभयो ? अब जुट्न प¥यो किन ? पार्टी फुटाउँदा जनविद्रोहको बाटो खुल्यो कि खुलेन ? वैद्यले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा पनि दुई तिहाई, त्यो नभए ठूलो पार्टी बन्ने आँकडा मिल्यो कि मिलेन ? प्रश्नहरु लगातार तेर्सिने छन् । के अब प्रचण्ड र वैद्यबीच फेरि मिलन हुँदा जनताको आवश्यकता सम्बोधन हुने नयाँ संविधान बन्छ ? खस्किएको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ ? मुलुकभित्र डरलाग्दो समस्याका रुपमा रहेको लोडसेडिङ, बेरोजगारी, जनता निर्यात, महँगीलगायतका समस्याहरु समाधान हुन्छन् ? हिजो पार्टी नफुट्दा गर्न नसकेका जनहितका कामहरु अब जुटेर कुन आधारमा कसरी सम्भव छ ?
पार्टी फुट्दाको नकारात्मक असर एमाओवादी वा माओवादी पार्टीलाई माया र विश्वास गर्नेहरुलाई मात्रै परेको होइन, सम्पूर्ण नेपाललाई परेको हो । अब पार्टी जुट्ने प्रक्रिया सुरू हुँदा एमाओवादी र माओवादी कार्यकर्तालाई मात्रै जवाफ दिएर पुग्दैन, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रचण्ड र वैद्यले जवाफ दिन सक्नुपर्छ– “किन फुटेको, अब किन जुट्दै छौँ ?” फुट्नु गलत र जुट्नु ठीक हो, तर ठीकचाहिँ कसरी ठीक ? भन्ने कुराको पनि व्याख्या हुन जरूरी हुन्छ । दुई माओवादी जुट्दा असफलतातर्फ उन्मूख नेपाल सफलतातर्फ लाग्छ भने, आङै जिरिङ्ग हुने खालका नेपाली जनताका समस्याहरु समाधान हुन्छन् भने, हरेक क्षेत्रका, वर्गका नेपाली जनतालाई चित्त बुझ्दो संविधान दिन सकिन्छ भने, राष्ट्रियता कमजोर भएर विश्वसामु नेपालीले मुन्टो निहु¥याएको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने पार्टी एकता र एकीकरण ठीक हो । होइन, फेरि पहिलेकै पाराले किचकिचे र वाहियात पारा झिक्ने हो भने फोकटको पार्टी एकीकरणको मुद्दा किन उठाइरहनु ? देश दुख्दा र असफलतातर्फ उन्मुख हुँदासमेत टुलुटुलु हेर्नका लागि त अरु पनि थुप्रै पार्टीहरु छँदै छन् । त्यसैका लागि यी दुई पार्टी फेरि एउटै किन बन्नुप¥यो ?